NMN ntụ ntụ - Nrụpụta ihe na-emepụta ihe nrụpụta
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / β-Nicotinamide Mononucleotide
AASraw nwere iru eru iji nye ngwaahịa na-egbochi ịka nká-NMN Powder na nnukwu ya na usoro CGMP na sistemụ njikwa njikwa egwu. Ogologo mmepụta anyị kwa ọnwa nwere ike iru 1500kg. Mmadụ Bịa kpọtụrụ anyị maka ihe ịzụta ozi:
Product Name β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ụdị Ụdị 334.22
NMN ntụ ntụ;
Nchekwa na Ijikwa 2-8 Celsius C na nkụ
NAD + bụ coenzyme dị mkpa achọrọ maka ndụ na ọrụ cellular.
♣ Ntọala nke NAD +, karịsịa ụdị NAD +, na-ebelata oge ọ bụla na ọtụtụ afọ.
♣ Ahụ na-emepụta NMN dị ka etiti ma ọ bụ "preursor" na NAD +. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe: ọkwa NMN dị elu pụtara ọkwa NAD + dị elu.
Edere: N'isiokwu ndị na-esonụ, NMN eji mee ihe kama β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nicotinamide Mononucleotide: Uru na ojiji
Ịka nká bụ usoro ebumpụta ụwa nke nwere ike imebi ahụ ike gị, echiche gị, na ịchọ mma gị. Ihe ịrịba ama mbụ nke ịka nká na -apụta ìhè na mpaghara ihu na n'olu n'ụdị ahịrị dị mma na ndọlị. Mmetụta ịchọ mma nke ịka nká na -abụkarị ihe ekwubigara ókè site na ihe ndị dị oke egwu dị ka ikpughe UV nke na -ebute akpụkpọ photodamaged yana nchekasị, nchekasị, na mmetọ gburugburu ebe obibi nke na -egbochi pores na -akpata iwe na ihe otutu.
Mgbakasị ndị a bụ naanị ihe ịchọ mma na ihe a na -ahụ anya nke ịka nká mana n'ime, ha nwere ike imetụta ike gị iji ịnụ ọkụ n'obi na ume na -arụ ọrụ ndụ kwa ụbọchị. Ọzọkwa, ịka nká nwere ike imetụta ịdị arọ gị na metabolism gị, na -ebutekarị oke ibu na -adịghị mma nke ejikọtara ya na ọnụego metabolism ngwa ngwa.
Enweghị ike izere mgbanwe ndị metụtara ịka nká n'ọtụtụ akụkụ n'ihi na ụfọdụ n'ime ha bụ nsonaazụ nke mitochondrial metabolism na mgbanwe na ngosipụta mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ọtụtụ mgbanwe mgbanwe anụ ahụ na -eme na ịka nká bụ nsonaazụ NAD+ belatara, coenzyme dị mkpa maka homeostasis na metabolism nke dị na ihe niile dị ndụ.
N'oge ntorobịa anyị, coenzyme a na-ekere òkè n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmeghachi omume niile na-emepụta ike mitochondrial ma na-ahụ ya nke ukwuu n'ime ahụ. Agbanyeghị, ka anyị na -eto, ọkwa NAD+ na -amalite ibelata nke ukwuu.
Ndị mmadụ n'ụwa niile na-akwalite ma na-ejikọ ihe mgbochi ịka nká na-enwe olileanya na ọ ga-egbochi mmetụta nke ịka nká. Agbanyeghị, ọ bụghị ha niile dị mma ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha anaghị emetụta ọkwa NAD+ n'ime ahụ. N'ihi ọtụtụ ọmụmụ. ndị ọkà mmụta sayensị na ndị nyocha achọpụtala ihe ngwọta iji lụso ihe ịrịba ama nke ịka nká, elixir nke ndụ, ya bụ, Nicotinamide Mononucleotide nke ozugbo oriri ọnụ gbanwere na NAD+ n'ime ahụ.
Nicotinamide Mononucleotide bụ nucleotide nke sitere na niacin ma ọ bụ vitamin B3 nwekwara ike ịchọta ya, dịka ọ dị, na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ụfọdụ dị ka ube oyibo na edamame. NMN enwetala traction n'oge na-adịbeghị anya dị ka ihe mgbakwunye mgbochi ịka nká, ọkachasị n'ihi mbipụta akwụkwọ, Lifespan, nke David Sinclair bipụtara.
A maara NAD+ ka ọ bụrụ akara nke ịka nká ruo nwa oge mana ịlụ ọgụ maka ịka nká na ọkwa ya siri ike. Nke a kachasị n'ihi na ọmụmụ ihe mbụ lekwasịrị anya n'ịbawanye ọkwa NAD+ n'ime ahụ site na iji mgbakwunye NAD+. Agbanyeghị, n'oge na -adịghị anya, achọpụtara na NAD+ enweghị bioavailability dị n'ahụ nke pụtara na ọ naghị etinye uche ya ngwa ngwa, na iri ya nke ukwuu enweghị mmetụta na ọkwa ya.
Ntinye NMN bụ ihe na -aga n'ihu nke NAD+ nke dị oke mkpa na usoro imepụta ume na ahụ mmadụ. Agbanyeghị, nyocha izizi banyere iji NMN ntụ ntụ ma ọ bụ mgbakwunye ka enwere ike ịgbakwunye ịka nká bụ naanị n'ime afọ 2020. NMN ka nwere ụzọ dị anya iji gaa n'ụwa nyocha mana ọmụmụ emere ruo ugbu a egosila na uru hypothesized na mmetụta nke NMN na ịka nká.
Enwere ike ịbawanye ọkwa NAD+ site na otu ụzọ abụọ dị mkpa, NMN dị ka ekwuru n'elu ma ọ bụ NR. NMN na NR na -agakọ, na ntụgharị nke NMN ka ọ bụrụ NR dị oke mkpa maka mmịpụta mbụ na ahụ. NR na -anọchite anya Nicotinamide riboside nke nwere ike ịbawanye ọkwa NAD+ dị oke egwu. Mụọ mgbakwunye na NR iji lụso mmetụta nke ịka nká ka amụrụ nke ọma na mgbakwunye NR nke a na -ekwupụta dị ka mgbakwunye 'nchekwa na ịnagide'.
Kedu ka NMN si arụ ọrụ n'ahụ?
NMN na -arụ ọrụ dị mkpa na usoro mmepụta ume na nrụzi DNA n'ime ahụ, n'agbanyeghị agbanyeghị. NMN na -akwalite njikọta ma ọ bụ imepụta NAD+ n'ime ahụ iji merie ụkọ ya, site na ụzọ nzọpụta. Enwere ike ịhazi NAD+ ihe karịrị otu ụzọ na ụzọ nzọpụta dabere na arụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke NMN. Ụzọ nzọpụta na-ezo aka n'ụzọ na-emepụta NAD+ yana ngwaahịa ikpeazụ nke ndakpọ NAD+ dị ka niacinamide ma ọ bụ NAM. NAM na -atụgharị ozugbo na NMN nke ahụ, site na usoro dị iche iche, na -emepụta NAD+. Nke a bụ ọrụ kachasị mkpa nke NMN n'ime ahụ yana ọ bụ isi ihe na -akpata nkwalite NMN 'na -ewu ewu.
Ozugbo ị were ọnụ nri NMN were ọnụ, ekwenyere na a na -atụgharị ha na NR n'ime ahụ n'ihi na ngwakọta NMN enweghị ike ịgafe na akpụkpọ ahụ, n'ime sel. Mgbe NR batara na sel, a na -atụgharị ya ọzọ na NMN site na mmetụta nke otu enzyme; nicotinamide ribose kinase ma ọ bụ NRK. NMN a na -enweta ụzọ nzọpụta maka biosynthesis nke NAD+ iji mejupụta ọkwa nke ikpeazụ na ahụ mmadụ.
Ọ dị mkpa ịmara ebe a na ntinye NAD+ site na mgbakwunye NMN abụghị naanị na -eme ka ike nwekwuo kamakwa ọ nwere ọtụtụ uru ahụike ndị ọzọ nke na -agbakwunye naanị na arịrịọ nke mgbakwunye NMN.
Uru NMN Ahụike
Njirimara ịka nká nke NMN abụghị naanị nsonaazụ NAD+ mụbara kamakwa nsonaazụ nke ụzọ na ọrụ NMN na ahụ mmadụ. Isi uru nke NMN ka bụ ikike ya ịbawanye ike ekwentị na anụ ahụ dịka ọ bụ nkwalite NAD+ agbanyeghị, ekwesighi ileghara uru ndị ọzọ anya ma ọ bụrụ na ị na -eleba anya na mgbakwunye NMN bụ nhọrọ ziri ezi maka gị.
Ịbụ onye nkwalite NAD+ na -enye ohere ka NMN mepụta ọtụtụ uru ahụike ndị ọzọ, dịka:
· Njikwa oke ibu
Mmetụta oke ibu abawanyela nke ukwuu kemgbe afọ iri atọ gara aga, ebe oke ibu nke ụmụaka nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ n'ime afọ iri atọ a. Nke a na -enyekarị nsogbu n'ihi na oke ibu na -ebute gị n'ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ nwere ike igbu mmadụ. Ọnụ ọgụgụ metabolic dị ala na basal bụ isi ihe na-akpata oke ibu metụtara afọ na-ahụkarị na ndị agadi. Ijikwa ụdị oke ibu a chọrọ usoro nke ọtụtụ ihe na -elekwasị anya homonụ agụụ yana ọnụego metabolic. Nnyocha e mere na Qatar chọpụtara na mgbakwunye NMN n'ụdị anụmanụ butere mmụba ngosipụta mkpụrụ ndụ nke homonụ abụọ dị mkpa na mgbochi agụụ na nyocha metabolism; leptin na sirtuin n'otu n'otu. Ọmụmụ ihe a na -egosi na inụbiga mmanya ókè nke NMN nwere ike belata agụụ iji nyere gị aka ifelata ma na -abawanye ọnụego metabolism, nke abụọ na -ebu oke ibu ị nwere ike ị nweta.
Ọzọkwa, ndị nyocha chọpụtara na NMN na-abawanye ọkwa NAD+ nke na mkpụrụ ndụ abụba nwere mmetụta na-akwalite metabolism, na-enyere aka belata oke ibu.
· Ọrịa shuga
Ọrịa shuga bụ otu n'ime nsogbu nke oke ibu na iji mgbakwunye NMN jikwaa na ịgwọ oke ibu nwere ike igbochi ọrịa shuga ịmalite. Mana nke ahụ abụghị naanị mmetụta nke NMN na ọkwa shuga ọbara. Achọpụtara na mbelata ọkwa NAD+ nwere njikọ na ibelata ọrụ mkpụrụ ndụ beta na pancreas, isi mmalite insulin n'ime ahụ. Ndị ọrụ nyocha kwenyere na nke a bụ isi pathophysiology n'azụ mmepe nke ụdị ọrịa shuga mellitus nke 2 na ndị okenye.
Nnyocha e mere n'ụdị anụmanụ gosiri na ọrịa shuga na ụmụ oke, mgbe enyere ya NMN mgbakwunye, emezila ọrụ mkpụrụ ndụ beta ka ọ na-ejupụta ụlọ ahịa NAD+ n'ime ahụ. Nnyocha ọzọ lekwasịrị anya n'ịchọta ebumnuche ọgwụgwọ maka ụdị ọrịa shuga mellitus ụdị 2 metụtara afọ na oke ibu chọpụtara na mgbakwunye NMN nwere ike imetụta imeju ma melite ịba ụba abụba. Ha nwekwara ike belata nchekwa abụba n'ime ahụ ebe ha na -emekwa ka nnabata glucose dị n'ahụ.
Ihe mgbakwunye NMN nwere ọtụtụ ụzọ ha si enyere aka melite nnabata glucose na nguzogide insulin, si otu a na -enyere aka ijikwa ụdị ọrịa shuga mellitus nke 2 na ndị agadi. A na -eji ụzọ ndị yiri ya belata ihe mgbaàmà nke nsogbu metabolic ndị ọzọ na -etolite n'oge ịka nká.
· Ọrụ na -arịwanye elu nke Sistemụ Ahụike
Nyere mgbakwunye ahụ na NMN bụ n'oge na-adịbeghị anya ghọrọ nhọrọ nwere ike ime nyocha, opekata mpe n'ụdị anụmanụ, ọ bụghị ihe ijuanya na a mụrụ ọrụ NMN n'ihe gbasara ọrịa COVID-19.
Mgbe ha na -amụ ọrụ dị iche iche nke coenzyme multitasking, NAD+, ndị nyocha chọpụtara na ọ na -arụkwa ọrụ dị mkpa na arụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke sistem. Ọrịa COVID-19 na-adịbeghị anya kpaliri ndị nyocha ahụ ịmụ njikọ dị n'etiti mgbakwunye NMN, NAD+mụbara, yana ịkwalite ọrụ mgbochi iji gbochie mmetụta nje ahụ.
Otu nnyocha dị otú ahụ chọpụtara na ọkwa NAD+ agbadala ma emesịa, mụbaa afọ, na -ebute ụdị ọrịa ahụ siri ike. Achọpụtakwara na ndị ọrịa a nọ n'ihe ize ndụ dị elu nke ịrịa ọrịa na ịnwụ n'ihi ọrịa COVID-19. N'ihi nsonaazụ ndị a, enwere ike ịtụle na mgbakwunye NMN nwere ike belata ike COVID-19 na-emetụta sistem na ahụ mmadụ.
· Mma ọmụmụ ọmụmụ nwa ka mma
Oge elekere nke na -egbochi ikike ịmụ nwa na afọ. Nnyocha dị iche iche emere na ụdị anụmanụ ụmụ nwanyị achọpụtala na mgbakwunye NMN nwere ike nwee ike belata oke ndị a yana ọbụna gwọọ infertility metụtara afọ n'ọnọdụ ụfọdụ.
Nnyocha e mere na nke merela agadi, ụmụ oke ụmụ nwanyị chọpụtara na mmụba nke ọkwa NAD+ nwere ike bute ịdị mma oocyte yana mbelata dị ukwuu na ọnụọgụ oocyte, nke na -ebelata ike ịmụ nwa na ọmụmụ. Iweghachi ọkwa NAD+ n'ụdị anụmanụ ndị a na mgbakwunye NMN ka ọ na -abawanye ogo oocyte na ọnụọgụ ya, yabụ na -emeziwanye ikike ịmụ nwa.
Emere nyocha ọzọ iji chọpụta nke ọma ihe na -ebelata ogo oocytes na afọ. Maka ọmụmụ ihe a, a na-anakọta oocytes sitere na ụmụ nwanyị meworo okenye ma mụọ, nke miri emi iji ghọta pathophysiology. Ndị ọrụ nyocha chọpụtara na ịdị mma oocyte belatara bụ ntụgharị nke isi na DNA mitochondrial nke oocyte, nke na -etolite n'ihi enweghị aha nke ọkwa NAD+. Nke a bụ ihe kpatara mgbakwunye NMN iji bulie ọkwa NAD+ kwenyere na ọ ga -akwalite ọmụmụ na ahụike ịmụ nwa, ọkachasị na ụmụ nwanyị meworo agadi.
Ebe ọ bụ na ụmụ nwanyị meworo agadi na -efunahụ ọtụtụ ikike ịmụ nwa ha n'oge menopause, mgbakwunye NMN, yana inwe ike meziwanye ahụike ịmụ nwa nwekwara ike nwee ike gbanwee menopause, ruo n'ókè. Nke a ga -enye ụmụ nwanyị ohere ịmụba ogologo oge na inwe ogo nke oocytes dị elu ọbụlagodi mgbe ha gafere n'ọnụ ụzọ afọ.
· Ịbawanye Ọbara Ọbara
Dika nyocha nke Dr. DAvid Sinclair mere, onye bayoloji na -ahụ maka ama ama ihe mgbakwunye NMN, ka anyị na -aka nka, sel nke endothelial nke na -ekpuchi arịa ọbara anyị na -ebelata ọnụ ọgụgụ na ịdị mma. Nke a na -emetụta nri ndị na -esi n'ọbara gafere na anụ ahụ nke arịa ndị ahụ na -esi na ya gafere, nke a na -emetụta ogo arịa ọbara niile. A kwenyere na mgbanwe ndị a bụ isi ihe na -akpata ịba ụba ọrịa ọrịa arịa ọbara n'etiti ndị agadi.
Mgbakwunye NMN ma ọ bụ mgbakwunye NR na -ebute mmụba NAD+, nke dịka ọmụmụ a si eme ka mkpụrụ ndụ endothelial na -arụ ọrụ ma nwee ike imepụta arịa ọbara ọhụrụ mgbe ndị agadi kwụsịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
· Enwekwukwa Ọmụma Ọmụma
Ọrịa neurodegenerative bụ nsogbu nkịtị nke na -emetụta ụbụrụ, na -ebelata ọrụ ọgụgụ isi na ịdị mma nke ndụ. Mgbakwunye na NMN iji bulie ọkwa NAD+ kwenyere na ọ dị oke mma n'ịkwalite ọrụ ọgụgụ isi na ịkwalite nlanarị nke mkpụrụ ndụ ụbụrụ.
N'ime ọmụmụ ebe enyere ụdị anụmanụ nwere mmerụ ahụ ụbụrụ na neurodegeneration otu onyinye, P7C3-A20, achọpụtara na ngwakọta a meziwanye ọrụ ọgụgụ isi wee kwụsị usoro neurodegenerative.
P7C3-A20 bụ ihe na-emepụta NMN nke na-emepụta NAD+. Inye oke na TBI onyinye a abụghị naanị na ọ nwere uru ọgụgụ isi kamakwa achọpụtara ya na-abawanye arụmọrụ na nhazi nke ihe mgbochi ụbụrụ ọbara, n'ihi na ngwakọta a bụ akụkụ nke akpụkpọ ahụ.
· Ọrụ arụ ọrụ ka mma na inwekwu ntachi obi
Ndị na -eme egwuregwu ga -achọ ịkwalite ikike ntachi obi ha kwesịrị ị nweta mgbakwunye NMN dịka achọpụtara n'oge na -adịbeghị anya na mgbakwunye ndị a nwere ike imeziwanye ikike ikuku ha. Uru a nke mgbakwunye NMN na -abụkarị n'ihi nrụpụta ume nke NAD+ na akwara, mana ọ dị mkpa iburu n'uche na ndị egwuregwu a na -enwetakwa mmụba dị ukwuu na ọkwa ikuku oxygen nke akwara ha.
Ọ kwesịrị m were NMN ntụ ntụ?
NMN Powder nwere ọtụtụ uru amụrụla nke ọma, n'ụdị anụmanụ na ụlọ nyocha. Enyochala ụfọdụ n'ime uru ndị a n'ime mmadụ, wee rụpụta ezigbo ihe. Ọ bụrụ na ị na -amalite ịhụ ihe ịrịba ama nke ịka nká ma ọ bụ n'ụdị ntachi obi belatara, ikike egwuregwu, ma ọ bụ akara ịchọ mma, ị nwere ike irite uru na ị nweta mgbakwunye NMN. A na -atụ aro ojiji ha maka ndị na -agbalị iweghasị ihe mgbaàmà nke ịka nká.
Ihe egwu NMN nwere ike
NMN bụ ihe a na -ahụkarị na ahụ mmadụ, na mgbe emechara nyocha na nyocha enweghị ihe egwu ma ọ bụ nsogbu metụtara ya. NMN, mgbe onye nrụpụta NMN rụpụtara ya nke ọma wee debe ya nke ọma na ụlọ ọrụ NMN ntụ ntụ na ụlọ gị, dị mma maka oriri mmadụ. Ịchekwa ntụ ntụ NMN dị mkpa n'ihi na ọ bụrụ na echekwara ya na ebe dị ọkụ, ọ ga -abụ niacinamide wee malite jiri nwayọ na -emebi ahụ gị mgbe ị na -eri ya.
Ịkwesighi ichegbu onwe gị dịka ntụpọ NMN dị ọcha nke ụlọ ọrụ NMN na -echekwa mgbe niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ebe oyi na nkụ. Ọzọkwa, ndị na -emepụta ntụ ntụ NMN na -ebipụtakwa ntụzịaka ziri ezi nke ojiji na nchekwa na nkwakọ ngwaahịa nke ihe mgbakwunye ka ị mara ka kacha mma iji ha, na -enweghị nnukwu nsogbu.
Ọ dịkwa mma ịmara na iji ihe mgbakwunye NMN eme ihe mgbe niile nwere ike bute ikike mbelata iji rụpụta nsonaazụ achọrọ. Maka nke a, a na -atụ aro ka ị were ezumike site na mgbakwunye mgbe ịmalite ịhụ uru NMN belatara dị ka ibelata ogo ụra yana ịbawanye ọrịa nke ọrịa.
N'ihe gbasara nlekọta kwesịrị ekwesị n'oge usoro nrụpụta na nchekwa, ma n'ụlọ ma n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ nweghị ihe egwu na mmetụta ndị metụtara NMN.
Ebee ka ịzụta NMN ntụ ntụ kacha mma?
Ị nwere ike zụta ntụ ntụ NMN na ụdị ndị ọzọ nke mgbakwunye NMN site na ụlọ ahịa ọgwụ dị n'ịntanetị, ụlọ ahịa ahụike, na ndị ogbo ha. Ị nwekwara ike ịzụta akpa akpa ntụ ntụ NMN nke nwere nnukwu ntụ ntụ NMN, n'agbanyeghị na ọ bụ ọkwa ụlọ ọrụ na nke ụlọ ọrụ buru ibu na -azụtakarị na -agbalị imepụta ọgwụ na capsules NMN.
I nwekwara ike zụta ntụ ntụ NMN site na Amazon ma ọ bụ Amazon Prime, mana ị kwesịrị ịkpachara anya ịzụta ezigbo ngwaahịa n'aka ndị na -ere ahịa ka ọtụtụ ndị na -ere ahịa nwere ike iduhie gị n'ịkwụ nnukwu ego maka dupe ma ọ bụ adịgboroja, nke na -enweghị mmetụta. ahụike gị ma ọ bụ nwee mmetụta na -adịghị mma na ahụike gị.
Tupu ịmalite ịzụ ahịa maka ntụ ntụ NMN, ị kwesịrị ịlele ihe ole na ole iji hụ na ị na -azụtara gị ngwaahịa kacha mma.
Ihe mgbakwunye NMN kacha mma bụ nke ejiri ntuziaka nchekwa yana ụkpụrụ niile arụpụtara. Ndị na -ebubata NMN kwesịrị ịgba mbọ hụ na echebara oke anya iji gbochie nsị NMN na nsị ma ọ bụ ihe ọ bụla nwere ike bute mmerụ ahụ karịa ahụ mmadụ.
Ọzọkwa, ntụ ntụ NMN kwesịrị ịdị, dị ka ekwuru n'elu, kwesịrị ịchekwa ya n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị nke ekwesịrị idobe n'oge njem nke mgbakwunye.
Ajụjụ gbasara NMN ntụ ntụ
· NMN ntụ ntụ nwere ike ịgbanwe ịka nká?
A na-akpọsa ntụ ntụ NMN ka ọ bụrụ mgbakwunye mgbochi ịka nká yana n'ụzọ ziri ezi, ebe ọ na-abawanye ọkwa NAD+ nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịbelata ọkwa ike gị ka ị na-eme agadi. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ntụ ntụ NMN nwere ike weghachite mmetụta ịka nká na sistemụ ahụ dị iche iche nke ahụ gị, wee weghachite gị na ụbọchị ntorobịa gị.
· NMN ntụ ntụ adịghị mma?
Achọpụtala ntụ ntụ NMN nke ọma iji chọpụta ọrụ na uru dị iche iche ojiji ya nwere ike na ahụ mmadụ. N'oge ọmụmụ ihe ndị a, a tụlekwara mmetụta ndị nwere ike ime naanị maka nsonaazụ iji gosi na iji NMN enweghị mmetụta ọ bụla metụtara ya. Nsogbu ọ bụla nwere ike ime na NMN ntụ ntụ bụ nsonaazụ mmadụ ma ọ bụ ụkọchukwu mere n'oge njem ma ọ bụ nchekwa. Ọ nweghị nke ọ bụla nwere ihe jikọrọ ya na ihe mejupụtara ngwa mgbakwunye mgbochi ịka nká.
· Ego ole ka NMN na -eri?
NMN ntụ ntụ bụ ngwa ahịa dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala mana enwere ya na ọ bara uru, nyere nnukwu ndepụta nke uru sayensị gosipụtara. Ọnụ ego dị elu nke ntụ ntụ NMN abụghị n'ihi ogologo ndepụta uru kama ọ bụ nsonaazụ nke usoro nrụpụta nke ukwuu nke onwe ya dị oke ọnụ maka ọtụtụ ndị na -emepụta NMN. N'inye ọdịdị dị oke ọnụ nke mgbakwunye ahụ, ị ​​ga -ahụrịrị mgbe niile na ị na -azụta ezigbo ngwaahịa n'aka ndị na -ere ahịa gbaara ezi àmà, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na -azụta NMN n'ịntanetị.
Ihe mgbakwunye NMN na-ewu ewu kwa ụbọchị, ekele maka ọrụ onye ndu ihe ọmụmụ David Sinclair bụ onye mefurula akụkụ dị ukwuu nke ya bụ nyocha ọrụ nyocha na ịmụ mmetụta nke nucleotide sitere na vitamin B3 a.
NMN bụ mmalite nke NAD+ nke bụ coenzyme dị mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke ọtụtụ ụzọ metabolic, mgbochi, na ụzọ homonụ. Isi ọrụ NAD+ bụ ọrụ ọ na -arụ na usoro mmepụta ike. Ebe ọ bụ na NAD+ dị oke mkpa maka imepụta ume, mbelata ahụ ọmụmụ na ọkwa ya ka otu afọ na -ebute mbelata nke ukwuu na ọkwa ike. Mgbakwunye NMN nwere ike inye aka nwekwuo ume site na ịkwalite ọkwa NAD+ n'ime ahụ.
NMN nwekwara ọtụtụ uru ndị ọzọ dị ka ịkwalite ọrụ metabolic, ịkwalite obi, ọgụgụ isi, ọbara, yana ọrụ sistem. A na -akwado ọrụ ndị a site na ihe akaebe sayensị na data, nke na -akpọ maka iji NMN eme ihe n'ime ndị agadi iji nyere ha aka ịlaghachi azụ n'oge ntorobịa ha.
Ewezuga ọtụtụ uru nke NMN, a nwekwara ike kwupụta ewu ewu ya na ọ nweghị nnukwu ihe egwu ma ọ bụ nsogbu metụtara ojiji ya. Ọ bụrụ na ọ na -adị gị ka afọ gị ga -abịakwute gị ma chọọ ị drinkụ mmiri site na isi iyi ntorobịa, mgbakwunye NMN nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma maka gị.
 Tarragó MG, Chini CC, Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC, et al. (Mee 2018). “+ Kụọnụ”. Cell Metabolism. 27 (5): 1081–1095.e10. ma ọ bụ: 10.1016 / j.cmet.2018.03.016. PMC 5935140. PMID 29719225.
 Stipp D (Machị 11, 2015). "Beyond Resveratrol: Mgbochi ịka nká NAD Fad". Sayensị American Blog Network.
 Cambronne XA, Kraus WL (Ọktoba 2020). “+ Mmekọrịta na Ọrụ na Sel Mammalian”. Nddị nke sayensị sayensị. 45 (10): 858–873. ma ọ bụ: 10.1016 / j.tibs.2020.05.010. PMC 7502477. PMID 32595066.
 Bogan KL, Brenner C (2008). "Nicotinic acid, nicotinamide, na nicotinamide riboside: nyocha nyocha nke molekụla nke NAD + vitamin na-edozi ahụ na nri mmadụ". Nyochaa Kwa Afọ Banyere Nri. 28: 115–30. ma ọ bụ: 10.1146 / annurev.nutr.28.061807.155443. PMID 18429699.
 Yue Yang, Anthony A. Sauve. NAD + metabolism: Bioenergetics, akara ngosi na nhazi maka ọgwụgwọ. Biochim Biophys Acta, 2016; DOI: 10.1016 / j.bbapap.2016.06.014.
 Mills KF, Yoshida S, Stein LR, Grozio A, Kubota S, Sasaki Y, Redpath P, Migaud ME, Apte RS, Uchida K, Yoshino J, Imai SI. Nchịkọta Ogologo nke Nicotinamide Mononucleotide Mitigates Age-Associated Physiological Decline in Mice. Cell Metab, 2016; DOI: 10.1016 / j.cmet.2016.09.013.
 Niels J. Connell, Riekelt H. Houtkooper, Patrick Schrauwen. NAD + metabolism dị ka ihe mgbaru ọsọ maka ahụike metabolic: anyị achọtara mgbo ọla ọcha? Diabetologia, 2019; DOI: 10.1007 / s00125-019-4831-3.
 Ann Katrin-Hopp, Patrick Grüter, Michael O. Hottiger. Iwu nke Glucose Metabolism nke NAD + na ADP-Ribosylation. Sel, 2019; DOI: 10.3390 / sel8080890.
 Shuang Zhou, Xiaoqiang Tang, Hou-Zao Chen. Sirtuins na insulin Nguzogide. N'ihu Endocrinol (Lausanne), 2018; DOI: 10.3389 / fendo.2018.00748.